Hawaii na-ekwupụta ụkpụrụ nduzi ọhụrụ maka ndị njem mba ofesi
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii » Hawaii na-ekwupụta ụkpụrụ nduzi ọhụrụ maka ndị njem mba ofesi
Aviation • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii • Ahuta • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
Taa Gọvanọ Hawaii Ige kwupụtara ihe ọhụrụ chọrọ maka njem mba ụwa yana oke ikike ọhụrụ n'ebe ndị mmadụ na-ezukọ. Gọvanọ nwere ihe a.
Hawaii na-agbaso ihe gọọmentị etiti chọrọ maka ndị njem mba ofesi na-aga ozugbo na Aloha Steeti.
Ihe ọhụrụ a chọrọ ga-amalite na Nọvemba 8, 2021.
Maka njem ụlọ, mmemme Njem Nchekwa nke Hawaii ga-anọgide na-adị, na ndị njem mba ụwa ndị na-abanye na obodo n'ebe ọzọ, a ga-emeso ha dị ka ndị njem n'ime ụlọ.
N'izu gara aga, gọọmentị etiti kwupụtara ihe ọhụrụ achọrọ maka ndị njem mba ofesi na-abanye na United States.
Dị ka ọnwa Nọvemba 8, ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa na ule chọrọ ga-adị maka ndị njem niile na-abanye na United States. N'ihi ya, steeti Hawaii ga-adaba n'ihe gọọmentị etiti chọrọ maka ịbanye United States maka ndị njem mba ofesi na-aga Hawaii ozugbo na Nọvemba 8.
Mmemme Njem Nchekwa nke Hawaii ga-anọrịrị maka njem ụlọ. A ga-emeso ndị njem mba ofesi na-abanye na obodo n'ebe ọzọ ma na-aga Hawaii dị ka ndị njem n'ime ụlọ maka ebumnuche nke mmemme Safe Travels Hawaii, nke pụtara na ha ga-agbasorịrị ihe mmemme anyị chọrọ. Yabụ na a ga-agbarịrị ha ọgwụ mgbochi ma ọ bụ nwee ule PCR na-adịghị mma.
Gọvanọ ahụ kwupụtakwara mbelata ụfọdụ usoro mbelata COVID-19. Ige bịanyere aka n'akwụkwọ ikike taa iji kwupụta oke steeti maka nnọkọ ọha, ụlọ oriri na ọ restaurantụ ,ụ, ụlọ mmanya, ụlọ ọrụ mmekọrịta na gyms. Dị ka ihe ncheta, ihe omume ime ụlọ na ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ mmanya, na ebe a na-elekọta mmadụ ga-aga n'ihu na-achọ ka ndị na-azụ ahịa nọrọ ọdụ na nnọkọ oriri na ọṅụṅụ ha, na-echekwa 6 ụkwụ nke ịdịpụrụ adịpụ n'etiti otu dị iche iche, anaghị ejikọta ọnụ, ma na-eyi ihe mkpuchi mgbe niile ma e wezụga mgbe ha na-eri nri ma ọ bụ na-aṅụ ihe ọṅụṅụ.
Malite na Nọvemba 12, mgbanwe abụọ ga-emetụta ọrụ n'èzí na ime ụlọ.
Agakwaghị edobe ihe mgbochi ndị a mmemme n'èzí n'ụlọ nri, ụlọ mmanya, na ebe a na-elekọta mmadụ.
Banyere ikike maka ihe omume ime ụlọ nwere nnukwu ihe egwu, dị ka ụlọ oriri na ọ restaurantsụ ,ụ, ụlọ mmanya na ebe a na-elekọta mmadụ, a na-edobe ikike ime ụlọ na 50% ọ gwụla ma County mebere amụma chọrọ ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa ma ọ bụ nsonaazụ COVID-19 na-adịghị mma n'ime awa 48, nke ikpe ahụ. agaghị abụ oke ikike. Nke a gụnyere gyms, ụlọ mmanya, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, na ụlọ ọrụ mmekọrịta.
Maka ozi ndị ọzọ na mmemme Njem Safe Njem Hawaii, gaa na weebụsaịtị.